Beenishaangul Maanduraa bakka jedhamuutti namoonni 8 ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Beenishaangul Maanduraa bakka jedhamuutti namoonni 8 ajjeefaman
Naannoo Beenishaangul Gumuz Godina Matakkal aanaa Maanduraa jedhamuutti halleellaa halkan Dilbataa eegaleen yoo xinnaate namoonni saddeet ajjeeffaman.
Namoota biroo 11 irra ammoo miidhaan qaqqabuu bulchaan godinichaa Obbo Girmaa Taadasa BBC'tti himaniiru.
Halleellichi meeshaalee qara qabanii fi meeshaa waraanaatiin raawwatamu kan dubbatan bulchichi, namoonni miidhaan irra qaqqabes hosipitaala Paawwiifi Chaagniitti wal'aanamaa jiru jedhaniiru.
Akka Obbo Girmaan jedhaniitti, gandicha keessatti manni jireenyaa tokko gubateera, miseensa raayyaa haalicha tasgabbeessa ture tokko irras miidhaa qaqqabeera jedhaniiru.
Guyyaa Sambataa halkan keessa namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aanicha ganda Gannata Maariyaam jedhamuutti mana Dura ta'aa keessa seenuun meeshaa isaa fudhachuun, cubeedhaan waraananii erga deemanii booda walitti bu'insichi eegalusaa Obbo Girmaan ni dubbatu.
Sababii kanaan maatiin dura taa'aa gandichaa bakkeewwan garaa garaatii walitti qabamuun gandichatti marsanii namuma argatan irraan miidhaa qaqqabsiisuu isaanii himaniiru.
''Kana duras rakkina naannichatti umamee tureef hawaasichi wal amanaa waan hin jirreefu, ammas kun haala sanaan kan walqabate ta'u danda'a'' jedhaniiru.
Kana dura miidhaa Jaawwiitti umamee ture kan yaadatan Obbo Girmaan, amma keessa miirri haaloo bakkeewwan adda addaatti bal'inaan mul'achaa dhufuu himu.
Erga miidhaan qaqqabeen booda naannicha tasgabbeessuuf yaaliin taasifamaa jiraachu Bulchaan Godina Matakkal kun himaniiru.
Jiraataan Maanduraa ganda Gannata Maariyaamii maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan tokko ammoo sababiin walitti bu'insichaa haleellaa namoota hin beekamneen waardiyaa gandaa irratti raawwatame ta'u dubbatu.
Jiraataan kun akka jedhaniitti, namoonni waardiyyicha irratti miidhaa qaqqabsiisan beekamu baatan illeen, kana sababa taasifachuun meeshaa wayita sirbaafi jigiiafuufamu Turaa jedhamu afuufamee jiraattonni Gumuz kallattii hundaan jiraatan akka walitti qabaman taasifameera jedha.
Isaan boodas namoota lafa qonnaa hojiirra turan irra miidhaan qaqqabuusaa fi magaalaa seenuunis mana gubuusaanii dubbateera.
''Hanga ammaattis reeffii hin kaafamiin jira. Namoonni baayyeen lubbusaanii dhabaniiru'' jechuun ibsa.
Kaleessa erga raayyaan ittisa biyyaa seeneen booda hanga tokko kan tasgabaa'e ta'ulleen, har'as yaaddoofi sodaan walfakkaatu jiraachu ibsu.
Beenishaangul Gumuz: Jiraattonni magaalaa Kamaashii waan nyaatan dhaban